Flash (Barry Allen) - ဝီကီပီးဒီးယား
The Flash (Barry Allen) သည် DC ကာတွန်းစာအုပ်များတွင်ပါဝင်သော စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ Barry Allen ကို ဒုတိယမြောက် the Flash ဇာတ်ကောင်အဖြစ်သိနိုင်သည်။ ဤဇာတ်ကောင်ကို Robert Kanigher နှင့် penciler Carmine Infantino တို့မှ ဖန်တီးကာ ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင်ထုတ်ဝေသော Showcase #4 တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သူ၏အမည်မှာ talk show အစီအစဉ်မှူး Barry Gray နှင့် Steve Allen တို့အမည်ကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Barry Allen သည် ၁၉၄၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းများတွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သောကာတွန်းစာအုပ်များ၌ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် Jay Garrick အမည်ရှိ ယခင်က The Flash ဇာတ်ကောင်ကို ပြန်လည်တီထွင် ဆန်းသစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
သူ့၏အဓိကစွမ်းအားမှာ သာမန်လူများထက်အလွန်လျင်မြန်စွာသွားလာလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း (Superhuman Speed) ဖြစ်ပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ မော်လီကျူးများကိုလည်း လျင်မြန်စွာတုန်ခါစေခြင်း (Molecular Vibration) အားဖြင့် သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ကိုင်တွယ်၍မရနိုင်ခြင်း (Intangibility) တစ်နည်းအားဖြင့် အရာဝတ္ထုများကို ဖောက်ထွင်းသွားလာနိုင်ခြင်း ကဲ့သို့သော စွမ်းအားအမျိုးမျိုးလည်း ရှိသည်။ Flash ၏ဝတ်စုံကိုအနီရောင်နှင့် ရွှေရောင်စပ်ထားကာ ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရန်နှင့် လေထုကို ထိုးခွင်းရန်အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသည်။ Flash ဇာတ်ကောင်များ၏ အစဉ်အလာအတိုင်း Barry Allen (Flash) ဝတ်ဆင်ထားသော လက်စွပ်တစ်ခုထဲတွင် အဆိုပါဝတ်စုံကို ချုံ့၍ ထည့်ထားသည်။
Barry ၏စံပြုဖွယ်ကောင်းသော ဇာတ်လမ်းများသည် DC ကာတွန်းများ၏ အပြိုင်စကြာဝဠာ (Multiverse) နှင့်ဆိုင်သော အတွေးအခေါ်ယူဆချက်များကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၊ ထိုအတွေးအခေါ်များသည် DC မှယနေ့တိုင် ဆက်လက်၍ ဆန်းသစ်ထုတ်ဝေခဲ့သော ဇာတ်လမ်းအမျိုးမျိုးတွင် အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ အစဉ်အလာအရလည်း The Flash ဇာတ်ကောင်များသည် DC မှအဓိကထားပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆန်းသစ်ထုတ်ဝေသော ဇာတ်လမ်းများတွင် ထင်ရှားအရေးပါသော နေရာတစ်ခုကို အမြဲရရှိထားခဲ့သည်။ (၁၉၈၅) တွင် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သော Crisis on Infinite Earths ကာတွန်းတွင် Barry သည်အပြိုင်စကြာဝဠာကို ကြိုးစားကယ်တင်ရင်းနှင့်ပင် သေဆုံးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အဆိုပါဇာတ်ကောင်ကို DC ကာတွန်းများမှ (၂၃) နှစ်တိုင်တိုင်ဖယ်ရှားထားခဲ့ရာမှ (၂၀၀၈) ခုနှစ်နောက်ပိုင်းများတွင် ထုတ်ဝေသော Grant Morrison ၏ Final Crisis ကာတွန်းဇာတ်လမ်းနှင့် Geoff Johns ၏The Flash: Rebirth ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲများကဲ့သို့သော ကာတွန်းစာအုပ်များတွင် ပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် Barry သည် Blackiest Night (၂၀၀၉)၊ Flashpoint (၂၀၁၁)၊ Convergence (၂၀၁၅) နှင့် en:DC Rebirth (၂၀၁၆) စသည်ဖြင့် အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သောကာတွန်းဇာတ်လမ်းများတွင် အချက်အချာဖြစ်သောဇာတ်ကောင်နေရာမှ ပါဝင်လာခဲ့သည်။
Barry Allen ဇာတ်ကောင်ကို ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများကဲ့သို့သော အခြားမီဒီယာများတွင်လည်း ရိုက်ကူးလာခဲ့သည်။ (၁၉၉၀) တွင် CBS မှရိုက်ကူးသော The Flash ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွင် Barry ဇာတ်ကောင်အဖြစ် John Wesley Shipp ကလည်းကောင်း၊ (၂၀၁၄) တွင် CW မှရိုက်ကူးသော The Flash ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွင် Grant Gustin ကလည်းကောင်း အသီးသီးရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ DC မှ (၂၀၁၆) တွင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများအဖြစ်ရိုက်ကူးပြသခဲ့သော Batman v Superman: Dawn of Justice နှင့် Suicide Squad ဇာတ်ကားများတွင်လည်း Flash(Barry Allen) ဇာတ်ကောင်အဖြစ် Erza Miller မှသရုပ်ဆောင်ကာ စက္ကန့်ပိုင်းမျှကြာမြင့်သောအခန်းငယ်လေးများဖြင့်စတင်မိတ်ဆက်ထားသည်။ (၂၀၁၇) တွင်ထွက်ရှိမည့် Justice League ဇာတ်ကားတွင်မူ အဆိုပါဇာတ်က​ောင်အကြောင်းကို ပိုမိုပေါ်လွင်စွာပါဝင်ရိုက်ကူးလာမည်ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်တွင်လည်း "The Flash" ဇာတ်ကောင်အတွက် ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများရိုက်ကူးလာရန်လည်းရှိသည်။
၁.၁ Justice League
Barry Allen သည်ရဲဘက်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ (The Flash: Iron Heights one-shot ကာတွန်းမှစ၍ မှုခင်းသိပ္ပံပညာရှင်(forensic scientist) ဟုအမည်ပြောင်းသွားခဲ့သည်။) အလုပ်လုပ်ရာတွင်အလွန်နှေးကွေးခြင်း၊ ကြိမ်ဖန်များစွာနောက်ကျခြင်းတို့၌ နာမည်ကျော်စောပြီး အမှုအခင်းများဖြေရှင်းရာ၌ပင် အမြဲစိတ်နှစ်ထားသောကြောင့် Iris West (Barry နှင့်စေ့စပ်ထားသောအမျိုးသမီး) မှာ သူ့အပေါ်အားမလိုအားမရဖြစ်ရသည်။ တစ်နေ့ Barry နောက်ကျသည်အထိ အလုပ်လုပ်နေသောညတစ်ညတွင် မိုးကြိုးအပစ်ခံလိုက်ရပြီ: ဓာတုပစ္စည်းအချို့ Barry ကိုယ်ပေါ်သို့ဖိတ်စင်သွားခဲ့သည်။ ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ် သူသည်အလွန်လျင်မြန်စွာပြေးလွှားနိုင်ပြီး အာရုံခံစားမှုနှင့် တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းများပါ လျင်မြန်လာသည်ကိုတွေ့ရှိသွားသည်။ သူသည်​ (ငယ်​စဉ်​က ဖတ်​ခဲ့ဖူး​သောကာတွန်​းစာအုပ်​ထဲမှ ဇာတ်​​ကောင်​ လူစွမ်​း​ကောင်​း Jay Garrick ထံမွ) Flash ဟူ​သောအမည်​ကိုယူကာ၊ ရင်​ဘတ်​​နေရာတွင်​ (Fawcett Comics Captain Marvel မူရင်​းစာအုပ်​မှ ပုံနှင်​့ဆင်​တူ​သော) လျှပ်​စီးမိုးကြိုးပုံပါ​သော အနီ​ရောင်​ကိုယ်​ကျပ်​ဝတ်​စုံကို ဝတ်​ဆင်ပြီး၊ Central City မြို့ခံ ရာဇဝတ်​မွုနှိမ်​နင်​း​ရေးသမားဖြစ်​လာသည်​။ Central City မြို့မှ တက္ကသိုလ်ပါ​မောက္ခတစ်ဦးဖြစ်သော Ira West (Iris ၏မွေးစားအဖေ) မှ Barry အတွက် Superhero ဝတ်စုံကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး ၎င်းကို Barry အရပ်သားပုံစံဖြင့်နေစဉ်တွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်သော လက်စွပ်ကိုလည်းဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါလက်စွပ်သည် Barry လိုအပ်လျှင် ချုံ့ထားသောဝတ်စုံကို ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး၊ တစ်ဖန်မလိုအပ်တော့ပါက ဝတ်စုံကိုကြုံ့စေသော ဓာတ်ငွေ့တစ်မျို့း၏အကူအညီဖြင့် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းပေးသည်။ တစ်ဖန် Barry ကိုယ်တိုင်လည်း အချိန်ခရီးသွားရာတွင် ပိုမိုတိကျစေရန်အကူအညီပေးသော ကိရိယာတစ်ခု (cosmic treadmill) ကိုတည်ထွင်ခဲ့ပြီး ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတော်တော်များများတွင် အဆိုပါကိရိယာကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ Speedster များထဲတွင် Barry ကိုလူကြိုက်များကြပြီး သူ၏နောက်မှပေါ်သော Speedster အားလုံးနီးပါးကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို Barry နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုကြသည်။(Speedster ဆိုသည်မှာ Flash ဇာတ်ကောင်ကဲ့သို့ပင် Speedforce ကိုအသုံးပြုကာ အလွန်လျင်မြန်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်သော အခြားနာမည်များဖြင့်ဇာတ်ကောင်များလည်းရှိသဖြင့် ၎င်းတို့အားလုံးကိုခြုံ၍ Speedster ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။) လင်းနို့လူသား (Batman) ကပင် သူ၏မိဘများအသတ်ခံရသောကံကြမ္မာဆိုးမျိုးမကြုံခဲ့ရပါက နောင်တစ်ချိန်တွင် သူကိုယ်တိုင် Barry လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ခဲ့ဘူးလိမ့်မည် ဟုပင်ပြောခဲ့ဘူးသည်။
Justice League of America #9 ကာတွန်းဇာတ်လမ်းထဲတွင် ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုနှိမ်နင်းရန် ဂြိုဟ်သားစစ်သည်များစိမ့်ဝင်လာသောအခါ၊ Barry အပါအဝင် ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏သူရဲကောင်းအချို့သည် ဂြိုဟ်သားနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့များသို့ ပါဝင်ထမ်းဆောင်ကြသည်။ အဆိုပါစူပါဟီးရိုးများသည် ဂြိုဟ်သားကျူးကျော်သူများကို မိမိဘာသာမိမိတစ်သီးတစ်ခြား နှိမ်နင်းနေရသောအခါ ဂြိုဟ်သားတစ်ဦးကိုပင်လက်ရဖမ်းဆီးရန် မလွယ်ကူဘဲရှိနေသည်။ အတူတကွကြိုးပမ်းနှိမ်နင်းကြကာမှ ဂြိုဟ်သားစစ်သည်များကို အနိုင်ယူနိုင်တော့သည်။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင်တော့ အဆိုပါသူရဲကောင်းများသည် Justice League ကိုဖွဲ့စည်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။
အဆိုပါနှစ်များအတွင်းတွင် Barry သည် Black Canary နှင့် Zatanna တို့အပေါ်တွင် စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်ရှိနေသည်။ သို့သော် သူကိုယ်တိုင်ပင် Iris West သည်သာ သူ၏အချစ်စစ်အချစ်မှန်ဖြစ်သည်ဟုခံစားရသောကြောင့် သူတို့နှင့်ချစ်သူရည်းစားအခြေအနေသို့ရောက်ရန် ဘယ်သောအခါမှကြိုးစာခြင်းမရှိခဲ့ခြေ။ နောက်ဆုံးတွင်လည်း Barry သည် Iris West ဖြင့်သာလက်ထပ်ခဲ့သည်။ Barry သည် Justice League အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေစဉ်အတွင်း Green Lantern (Hal Jordan) နှင့်လည်းမိတ်ဆွေအရင်းအချာများဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Barry နှင့် Hal Jordan တို့မိတ်ဆွေဖြစ်မှုအပေါ်အခြေခံ၍ DC မှ Flash and Green Lantern: The Brave and the Bold ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
The Flash # 123—"Flash of Two Worlds" ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွင် Barry သည် Earth-Two သို့ပို့ဆောင်ခြင်းခံလိုက်ရပြီး၊ ထိုကမ္ဘာတွင်ပင် DC ၏ မူလ Flash ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သော Jay Garrick ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်ဆက်တည်းပင် ယခင်က Jay Garrick ၏စွန့်စားခန်းဇာတ်လမ်းများမှာ Earth-One ပေါ်ရှိအဖြစ်အပျက်များကို ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု DC မှပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါဇာတ်ကြောင်းမှအစပြု၍ DC ၏အပြိုင်စကြာဝဠာအကြောင်းကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ရာမှ Flash ၏ကိုယ်ပိုင်ကာတွန်းများ၌လည်းကောင်း Earth-One ရှိ Justice League of America အဖွဲ့၌ပါဝင်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းမှ ဇာတ်လမ်းများ၌လည်းကောင်း Earth-Two မှ Justice Society of America ကာတွန်းများ၌လည်းကောင်း အဆိုပါအပြိုင်စကြာဝဠာအကြောင်းမှာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာဆက်လက်ပါဝင်ခဲ့သည်။ Flash #179 – "The Flash – Fact or Fiction?" ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွင် Barry သည် Earth Prime ဟုခေါ်သော အဆိုပါဇာတ်ကောင်များကိုဖန်တီးနေသော ကာတွန်းဆရာများနေထိုင်ရာ တစ်နည်းအားဖြင့် ယခုကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာကမ္ဘာပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူသည် Flash ကာတွန်းစာအုပ်များ၏တည်းဖြတ်သူ Julius Schwartz ၏အကူအညီကိုရယူကာ သူ၏မူလကမ္ဘာ သို့ပြန်ရန် အကူအညီပေးမည့် Cosmic Treadmill တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Barry ကဲ့သို့ပင် မတော်တဆမှုတစ်ခုမှ စူပါအမြန်စွမ်းအားများကိုရရှိလာသော Iris ၏တူဖြစ်သူ Wally West ကိုလည်း Barry အတွက် တွဲဖော်တွဲဖက်အဖြစ် ရရှိခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Jimenez၊ Phil (2008)။ "The Flash"။ in Dougall၊ Alastair (ed.)။ The DC Comics Encyclopedia။ New York: Dorling Kindersley။ pp. 124–127။ ISBN 0-7566-4119-5။ OCLC 213309017။
↑ Bob Rozakis (2002-07-01)။ Alter Egos And Alternate Earths။ Comicsbulletin.com။ 2011-08-10 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2015-11-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Flash_(Barry_Allen)&oldid=530730" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၀၇:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။